Tato ho ato, Lutonites tompon-tany sy ny mpitsidika efa be dia be mba hiaro azy manintona be atao - ao anatin'izany ny toerana mafampana toy ny zaridaina maitso mavana sy ny mahavariana ara-tantara artefacts ny Stockwood Discovery Center sy ny havoana Be havoana, lohasaha sy tongotra lavitra lalana ny Barton Nature Reserve Hills.
Bus Tsidika mitondra miaraka aminy soa maro - izany mafy, mety ary afaka miala tsy ny dian-tongotra noho ny entona karbaona fiara Tsidika.
Tsingerin'ny mpanjaka tany 56-66 Dunstable Road in Luton dia manana isan-karazany ny bisikileta, anisan'izany ny herinaratra, tandems ary na dia variraiventy farthings - ianao tena mahita zavatra mety.
Browse Ny Luton National dalamby Station tranonkala pejy ary ianao hahita ny harena ny vaovao mikasika ny mahazo ny sy ny peo, trano toy ny restrooms sy mivezivezy ny fidirana.
Luton Airport dia mahatahotra launchpad ny sidina ho any amin'ny isan-karazany ny toerana mahafinaritra - anisan'izany Aberdeen, Malaga, ary Zurich - ka masoandro, ranomasina ary na dia ny oram-panala dia fohy ihany izy hop izahay.
Izany no amin'ny lisitra! Zarao ny Travel Luton ny torohevitra amin'ny fizarana ity lahatsoratra bilaogy amin'ny twitter.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-handy-transport-hacks-for-luton-travellers/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#Airport #valan-javaboary Luton travellers fiarandalamby